Profile | MRPDA
Registered No : 113471972
Myanmar Real Property Development Association
Myanmar Real Property Development Association was officially set up by the permission of the Union of Myanmar Government, and received the license on the date of (20.3.2017). It is called as MRPDA in short term.
The MRPDA was formed in State Level by joining together with Yangon Region Real Estate Entrepreneurs’ Association (YRREEA) and Real Property Agent Development Association of Mandalay Region (RPADAMR) to participate as the brothers team for all the same business in real estate field in the whole country.
We are cooperating by the people who really concerning with the real estate fields to get the progress for our association by the members of 2300.
Main Objectives of MRPDA
To perform and cooperate the tasks of the real estate field and to get the more development of MRPDA by organizing to become as one unit for the scattered Entrepreneurs of real estate and Entrepreneurs of construction.
To do and upgrade of Social Affairs, Health and Knowledge of the real estate subjects for the members of MRPDA.
To serve partly for the sake of people and the Union of Myanmar.
To cooperate with the Ministries and Departments of the Union of Myanmar for the development of Housing and Myanmar Real Estate World.
To cooperate with the international organizations, if the chance would become for the benefit of the Myanmar Real Estate World and development of Housing.
Activities of MRPDA
Board of Directors are still trying continuously to finish the Draft Law of Myanmar Real Estate Services after getting the license for MRPDA by the assistance of the Commission for the Assessment of Legal Affairs and Special Cases.
On (24.4.2017), Board of Directors of MRPDA went to Vietnam, discussed with the authorized persons of Organizations, Associations and studied to support for the Draft Law of Myanmar Real Estate Services Sector by the assistance of the Myanmar Embassy for the Socialist Republic of Vietnam.
MRPDA always donates continuously for the case of Natural Disaster such as Water Flooding, Fire, Earth-quake and for the people who run away from the local battles in Myanmar.
MRPDA isateam which has intensely desire and to try hard to get the both sides’ benefit by cooperating with the International Organizations. That is our Future Prospect for the people and the State.
မြန်မာနိုင်ငံ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး အသင်းသည်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရထံမှ တရားဝင်ဖွဲ့ စည်းခွင့်ရပြီး သောအသင်းဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်လို Myanmar Real Property Development Association ဟုခေါ်ဆိုပြီး (၂၀.၃.၂၀၁၇) ရက်နေ့ တွင် အသိအမှတ်ပြုလိုင်စင် ရရှိခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်း ( MRPDA ) ကို ရန်ကုန်တိုင်း အိမ်ခြ့မြေ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ( YRREEA) နှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အိမ်ခြံမြေ ကိုယ်စားလှယ်များဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်း ( RPADAMR) နှစ်သင်းပူးပေါင်းပြီး ညီနောင်အသင်းဖွဲ့ကာ တစ်နိုင်ငံလုံး လွှမ်းခြုံဖွဲ့ စည်း နိုင်ရေးအတွက် အဆင့်မြှင့်ဖွဲ့ စည်းခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း ဖွံ့ ဖြိုး တိုးတက်ရေး အသင်းတွင် အသင်းဝင် အင်အား ၂၃၀၀ ဖြင့့်် အမှန်တကယ် အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း ပတ်သက်သူများနှင့်အသင်းတိုးတက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွှက်လျက်ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းဖွံ့ ဖြိုး တိုးတက်ရေးအသင်း၏ အဓိက ရည်ရွှယ်ချက်များမှာ-
၁။ ပြန့်ကျဲနေသော အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအား တစ်စုတစ်ဝေးတည်း စည်းရုံးစုစည်းကာ အသင်းသားအချင်းချင်း လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွှက်၍ အသင်းပိုမို ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွှက်နိုင်ရန်။
၂။ အသင်းသားများ၏ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သတ်သော ပညာရပ်များ ပိုမိုမြင့်မားရေးအတွက် ဆောင်ရွှက်နိုင်ရန်၊
၃။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လုပ်သားပြည်သူများ၏ အကျိုးကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ အကျိုးပြုနိုင်ရေး၊
၄။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်ခြံမြေလောကနှင့် အိမ်ရာများဖွ့ံဖြိုးတိုးတက်ရေးကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွှက်နိုင်ရန်၊
၅။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်ခြံမြေလောကနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမည့် အခွင့်အလမ်းများရရှိ ပေါ်ပေါက်လာပါက နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွှက်နိုင်ရန်၊
စသည့်ရည်ရွှယ်ချက်များနှင့် အဓိက ဖွဲ့ စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်း၏လှုပ်ရှားမှုများမှာ ညီနောင်အသင်းများဖြစ်သောရန်ကုန်တိုင်းအိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းနှင့်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
အိမ်ခြံမြေ ကိုယ်စားလှယ်များဖွ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး အသင်းတို့မှ နဂိုရှိရင်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့်မြန်မာနိုင်ငံ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်း လိုင်စင်ရရှိ ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ အိမ်ခြံမြေ၀န်ဆောင်မှု ဥပဒေကြမ်း တစ်ရပ် ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ပြည့်သူ့ လွှတ်တော်အထူးကိစ္စရပ်များလေ့လာဆန်းစစ်ရေးကော်မရှင် နှင့် ပူးပေါင်းကာ ဥပဒေကြမ်းရရှိရေးအတွက် တစ်စိုက်မတ်မတ်ဆောင်ရွှက်လျက် ရှိပါသည်။
(၂၄.၂.၂၀၁၇) နေ့ တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အိမ်ခြံမြေ၀န်ဆောင်မှုဥပဒေအထောက်အကူပြုရေးအတွက် ဗီယမ်နမ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံရုံးအကူအညီဖြင့် ဗီယမ်နမ်နိုင်ငံသို့သွားရောက်၍် ဗီယမ်နမ်နိုင်ငံအတွင်းရှိ အသင်းအဖွဲ့ အစည်းကြီးများတွေ့ ဆုံကာဆွေနွေးလေ့လာခဲ့ကြပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းသညြ်မန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များဖြစ်သောရေဘေး၊ မီးဘေး၊ငလျင်ဘေး၊စစ်ဘေးရှောင်ဒေသများတွင် အထူးအဆက်မပြတ် လှူဒန်းမှုပြုနေသော အသင်းဖြစ်ပါသည်။
ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအနေဖြင့် နိုင်ငံနှင့်ပြည်သူအတွက် နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ကာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိအောင် စွမ်းစွမ်းတမံ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်သွားရန်ဆန္ဒပြင်းပြသော အသင်းဖြစ်ပါသည်။
No.40,East Horse Race Course Street,TarmweTownship,Yangon,Union of Myanmar.
+959-2004407 ၊+959 - 5107454 ၊ +959 - 5037488
Copyright © 2022, MRPDA.All Rights Reserved.
Designed by Triple Luck